အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ မြည်းလေး သတ်ခံ လိုက်ရပြီ””( ဥပမာကောင်းလေးပါ ) – Shwe Likes
အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ မြည်းလေး သတ်ခံ လိုက်ရပြီ””( ဥပမာကောင်းလေးပါ )
ကိုမြည်း ဟာ အမြဲအလုပ်ကြိုးစားပေမယ့် သခင်ဟာသူ့ကိုတော်ရုံ နဲ့ ချီးကျုးလေ့ မရှိပါဘူး ။
ဒီနေ့တော့ ကိုမြည်းဟာ ပစ္စည်းတွေ လည်း မနက်တပိုင်းလုံးသယ်ထားတယ်။ နေ့ခင်းရောက်တော့လည်း ကိုနွားနေမကောင်းလို့ဆိုပြီး ကိုနွားနေရာမှာ သူက လယ်ကူထွန်ပေးခဲ့သေးတယ်။ လယ်ထွန်တာ တစ်ခါမှလည်းမထွန်ဖူး၊ နေကလည်းအတော်ပြင်းတော့ ညနေစောင်းအိမ်အပြန်မှာ ကိုမြည်းဟာ အတော်လည်း ပင်ပန်းနွမ်းလျနေခဲ့တယ်။
သခင်ကိုခြံဝမှာ အသင့်လာကြိုနေတဲ့ ကိုခွေးကတွေ့တော့ ” ဟာ ကိုမြည်း အဆင်ကောပြေရဲ့လား? အတော်လေးပင်ပန်းနေပုံပဲ! ” ” ဟုတ်တယ် ကိုခွေးရေ! ဒီနေ့တော့ တော်တော်လေးပင်ပန်းသွားတယ်လေ နေကလည်းအတော်လေးပူတာကိုးဗျ မနက်ဖြန်တော့ တစ်ရက်လောက်နားချင်မိတယ်ဗျာ ဖျားသွားလို့ ရက်ဆက်နားရင် အလုပ်တွေမပြီးမှာလည်းဆိုးတာဗျ !!! ”
ကိုခွေးဟာ ပင်ပန်းနေတဲ့ကိုမြည်းကို နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာချိန်မှာ ခြံထောင့်မှာ ကိုကြောင်ကိုတွေ့တော့ ကိုမြည်းအကြောင်းပြောပြဖြစ်တယ်။ ” ကိုမြည်းသနားပါတယ်ဗျာ သူဒီနေ့တော်တော်လေးပင်ပန်းခဲ့တယ်ပြောတယ်။ မနက်ဖြန်တစ်ရက်လောက်နားချင်မိတယ်ဆိုပြီး ညည်းနေရှာတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်လေ။ သခင်ကလည်း ကိုနွားနေမကောင်းတော့ ကိုမြည်းနဲ့ပိုရုန်းတာကိုးဗျ! ”
ကိုကြောင်က ကိုခွေးထွက်သွားတော့ သူ့နားမြက်လာစားတဲ့ ကိုဆိတ်ကိုပြောပြတယ်။ ” ကိုမြည်းက သခင်က သူ့ကိုအလုပ်အများကြီးလုပ်ခိုင်းလို့ဆိုပြီး ညည်းနေတာ။ ခုလည်းမနက်ဖြန်တစ်ရက် အလုပ်မလုပ်ဘဲနားချင်တယ်ဆိုပြီး ညည်းနေတာလေ။ “လို့ပြောပြီးထွက်သွားတယ်။
ကိုဆိတ်က သူ့အနား အစာလာစားတဲ့ ကိုကြက်ကိုတွေ့တာနဲ့ ” ကိုမြည်းက သခင်အသစ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတယ်ဆိုလား? အင်းလေ။ သူ့အနေနဲ့ကျတော့လည်း တခြားသခင်တွေသာဆို ဒီလောက်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး တွေးမိမှာပဲ။ သနားပါတယ်။ ”
ကိုဆိတ်ထွက်သွားတာနဲ့ ကိုကြက်က ကိုဝက်ကိုလှည့်ပြောတာက ” ကိုမြည်းက တို့သခင်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပေးချင်တော့ဘဲ သခင်အသစ်ရှာချင်နေတယ်ဆိုလား? သခင်က သူ့အပေါ်ဆို အလုပ်တွေအရမ်းခိုင်းပြီး နှိပ်စက်တယ်ဆိုပြီးပြောနေတာလေ! ”
ညစာကျွေးချိန်ရောက်တော့ သခင်မလာချိန်မှာ ကိုဝက်က သခင်မနားကိုကပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ ” သခင်မကို သတိပေးစရာတစ်ခုရှိတယ်။ ကိုမြည်းကိုကြည့်ရတာ ခုတလောတစ်ခုခုကို ကြံစည်နေသလိုပဲဗျ။ ကျွန်တော်ကြားတာကတော့ သခင်ကသူ့အပေါ်မညှာမတာခိုင်းလို့ မလုပ်ပေးချင်တော့ဘူး သခင်အသစ်ရှာမယ်ဆိုလား? ”
သခင်မဟာ စိတ်တိုဒေါသထွက်ပြီး ညစာစားနေတဲ့ သခင်ကိုသွားပြောတယ်။ ” မြည်းက ရှင့်ဆီမှာ မလုပ်တော့ဘဲ တခြားသခင်ရှာနေတာတဲ့ ဒီလိုသစ္စာမရှိတဲ့ဟာကို ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပြော? ”
ကိုမြည်းရဲ့ သခင်ဟာလည်း စိတ်တိုဒေါသထွက်ပြီး ” သစ္စာဖောက်တွေကို အရှင်မထားဘူး ” ဆိုပြီး ပင်ပန်းပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့ ကိုမြည်းကိုသတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ အလုပ်ကို မညည်းမငြူကြိုးစားတဲ့ မြည်းလေးဟာ သတ်ခံလိုက်ရတယ်။
ဘယ်တော့မှ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ မညည်းပါနဲ့။ သင့်ဘေးမှာ သင့်ကိုတွန်းချပြီး နေရာလုချင်နေသူက အများအပြားရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်ကိုယ်ဘာကြောင့် အလုပ်ပြုတ်မှန်းတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်ကိုယ်တိုင်က လုပ်ငန်းရှင် (သို့) အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘေးစကားတွေကို ကိုယ်တိုင်မမြင်ရ၊ မကြားရဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူမယုံလွယ်ပါနဲ့။ မဟုတ်ရင်မှားယွင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမိပြီး ၀န်ထမ်းကောင်းတွေ ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။
Previous post ပျိုမေတို့ရဲ့ဆံကေသာအတွက် စက်ဆွဲစရာမလိုဘဲ ဆံပင်ပျော့အောင် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း..
Next post အာဏာပြန်ရခဲ့ရင် မယ်ခွေ ၏ “ လက်ဆောင် ” ကဗျာကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ထည့်သွင်းပေးမည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဦးသန်းဌေးပြောဆို